Duqeyn Ka Dhacday Gedo oo lagu Dilay Afar Caruur
Afar caruur ah ayaa ku geeriyooday duqeyn diyaaradeed oo maanta ka dhacday tuulada Ilaale oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana masaafo dhan 15 km dhanka koonfurta uga beegan degmada Ceelwaaq ee Gobbolka Gedo.
Goobjoogayaal ku suggan deegaanka ay duqeynta ka dhacday ayaa VOA u xaqiijiyey in diyaaradaha duqeynta geystay ay leedahay dowladda Kenya.
Afarta caruurta ah ee geeriyootay ayaa kala ahaa 3 wiil iyo gabar, waxaana arrintan ay cabsi xooggan ku abuurtay dadka deegaanka Ilaale.
Diyaaradaha dagaalka ee Kenya ee duqeynta ka geystay deegaanka Ilaale ayaa la sheegay inay beegsanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo la sheegay inay ku sugaanaayeen nawaaxiga tuulada Ilaale.
Wararku waxa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay baadigoobayaan maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkii 20-kii bishan lagu dilay shan ka tirsan booliska dowladda Kenya kadib weerar jid gal ah oo a dhacay meel u dhow degmada Mandhere ee Waqooyi bari Kenya.
Masuulyiinta degmada Ceelwaaq ee Gobbolka Gedo oo ay hoostagto deegaaanka ay duqeynta ka dhacday ayaa xaqiijiyay in duqeynta maanta ay sidoo kale khasaare xooggan ka soo gaadhay xoolo Geel u badan oo ay leeyihiin dadka deegaanka.
Dhinaca kale, hal askari ayaa dhintey mid kalana waa uu dhaawacmay markii qarax bam gacmeed la tuurey ah xaley lagu weeraray saldhig ciidmaada nabad sugida Jubbaland ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Kismaayo.
Dadka deegaanka ee ku dhow xarunta qaraxan lala beegsadey ayaa maqley dhawaaqa Bombkan iyo ciidamada oo rasaas ridey markii dambe.
Madaxweyne Xasan oo Baydhaba ka Furay Shirka Madasha
Wareysi: Aftida Britian iyo Saamaynteeda Dhaqaale
Eritrea: Ethiopia Waxay Qorsheeneysaa Dagaal Buuxa
Sideed Qof oo ku Dhintay Dagaal Beeleed ka Dhacay Mudug
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 323-aad